सातु खाँदा हाम्रो शरीरलाई हुने केही फाइदाहरू
डढेको भाँडोलाई पहिला जस्तै बनाउनको लागि टिप्स
१. जुन भाँडो डढेको छ त्यसमा १ चम्चा बेकिङ्ग सोडा २ चम्चा कागतीको रस र २ कप तातो पानी हाल्नुस् । अब स्टीलको स्क्रबर ले भाँडालाई रगडेर सफा गर्नुस् । यसो गर्नाले डढेको भाँडो सफा हुन्छ । २. तपाईं एक कागती लिएर डडेको भाँडोमा रगडेर भाँडोमा तातो पानी हालेर ब्रसले घोटेर माझ्नुस्, भाँडा सफा हुन्छ । ३. डढेको भाँडोमा नून...
विना शिरानी सुत्ने गर्नुहोस् पाउनुहुनेछ यी फाइदाहरू
१. यदि तपाईं अक्सर ढाड, कम्मर या आसपासको मांशपेशीमा दुखाई महसुस गर्नुहुन्छ भने शिरानी विना सुत्ने प्रयास गर्नुस् । यसले गर्दा तपाईंको ढाड दुख्ने समस्या कम हुन्छ । २. सामान्यतया गर्धनको अलावा पछिल्लो भागमा दुखाई तपाईंको शिरानीको कारण हुन्छ । तकिया बिना सुत्नाले अंगमा रक्त सन्चार राम्रो हुन्छ र दुखाईबाट मुक्त हुन सकिन्छ । ३. कति पटक गलत शिरानीको प्रयोगले...
धुम्रपानको लतले तपाईंलाई मात्र हैन तपाईंबाट जन्मिएको सन्तानलाई पनि प्रभाव पार्छ
यदि तपाईं धुम्रपानको सौखिन हुनुहुन्छ र यसको आदत तपाईंमा बसेको छ भने यो कुरालाई मनन गर्नु होला यो आदत तपाईंको लागि मात्र घातक हुँदैन बल्की यसले तपाईंको बच्चामा पनि असर गर्छ । रिसर्चमा पनि यो कुरा बताईएको छ कि जुन व्यक्ति धुम्रपानको लतमा फसेका हुन्छन् उनीहरूको बच्चा बिशेष गरेर छोराहरूमा यसले सिधा प्रभाव पार्छ । यसले पुरुषमा सुक्राणुको कमी गराउँछ...
सावधान! महिनावारी हुँदा कहिल्यै नगर्नुस् यी कार्यहरू
१. यो कहिले पनि नसोच्नुस् कि महिनावारी हुँदा गर्भ रहन्न भनेर असुरक्षित सम्बन्ध नराख्नुहोला । यो समयमा पनि गर्भवती हुने सम्भावना रहन्छ साथै संक्रमणको पनि अधिक खतरा हुन्छ । २. यो समयमा शरीरले यतिकै कमजोरी महसुस गर्छ । यस्तो अवस्थामा ब्रत बस्ने या खाना छोड्ने गर्दा तपाईंलाई समस्या आउन सक्छ । महिनावारीको समयमा तपाईंलाई पौष्टिक आहारको जरूरी हुन्छ । ३....
नियमित रुपमा गाईको दूध सेवनले निम्न फाइदा मिल्छ
१. बच्चाको बौद्धिक विकासको लागि गाईको दूध लाभदायक हुन्छ । दिमागको विकासको लागि गाईको दूध जति लाभदायक अरू दूध हुँदैन । २. गाईको दूध सजिलै पचाउन सकिन्छ । यसले पाचन प्रणालीलाई पनि मजबुत बनाउँछ । ३. पुरुषमा शुक्राणुको कमी हुँदा गाईको दूध एकदमै अचुक औषधी हुन्छ । गाईको दूधले विर्यलाई बाक्लो बनाई शुक्राणुको संख्यामा बृद्धि गरेर बल प्रदान गर्छ ।...
के घाम ताप्नाले ठीक हुन सक्छ ब्लड क्यान्सर, सोधले के भन्छ ?
घाम ताप्नु हाम्रो शरीरको लागि लाभदायक हुन्छ । तनाव, अनिन्द्रा जस्तो समस्याको अलावा यदि तपाईं ब्लड क्यान्सरबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने घाम ताप्नु अनिवार्य हुन जान्छ । हालसालै आएको एक सोधले यो कुरा अगाडी ल्याएको छ । सोधको अनुसार भिटामिन डीको पर्याप्तता ब्लड क्यान्सरबाट बचाउनको लागि सहायक हुन्छ । भिटामिन डी को महत्वपूर्ण स्रोत नै सूर्यको प्रकाश मानिन्छ । हालसालै ब्लड...
के तपाईंलाई थाहा छ, रेड वाइन पिउनाको ७ फाइदा ?
हुनत मदिरा पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ । तर मदिराको केही प्रकारले शरीरलाई फाइदा पनि गर्छ । यस मध्येको एक हो रेड वाइन जुन कालो अंङ्गुरबाट बनाइन्छ । र, स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ । रेड वाइनका यी फाइदाहरू १. रेड वाइन आइरन, म्याग्नेशियम, भिटामिन बी ६ र भिटामिन सीले भरपूर हुन्छ । यसको अलावा यसमा प्रोएन्थोसायनीडीन्स र रेस्वेराट्रोल जस्तो...
हामी तरकारीलाई लामो समय सम्म सुरक्षित राख्नको लागि तरकारीलाई फ्रिजमा राख्ने गर्छौ । तर केही चिज यस्ता हुन्छन् जुन फ्रिजमा राख्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । यसमा आलु पनि एक हो । यदि आलुलाई लामो समय सम्म सुरक्षित गरेर राख्नको लागि फ्रिजको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ। आलुलाई फ्रिजमा राख्नु खतरनाक हुन जान्छ । खास...